यसकारण राई समुदायले बाख्राका मासु खाँदैनन् « Tuwachung.com
यसकारण राई समुदायले बाख्राका मासु खाँदैनन्
चन्द्रकुमार राई ‘हतुवाली’	२०७८ आश्विन १९, २२:१२
मुत्दुममा बाख्रालाई किरात राई समुदायले अपवित्र मान्नुुका कारणबारे चतुुरभक्त दुमी राई ‘निप्सुुङ पत्रिका’ (संवत् २०५९) मा लेख्छन्, ‘किरात पुुर्खा खक्चिलुपा र नागेलुम्को विवाहपछि छमदम अर्थात् किरात धर्म तथा संस्कृतिअनुसार तीन दिनसम्म गरिने महान् कार्य गर्नाले नाम र उपाधि पाइन्छ भनेर विश्वास गरिन्छ । सो कार्य गर्ने निधो गरे । यो कार्य गर्न खक्चिलुपाले दिदीहरू तोमा, खेमाको उपस्थिति आवश्यक ठाने । उनीहरूले दिदीहरूको निम्ता गर्न उपियाँ पठाए । दिदीहरूले उपियाँको टाउको किचेर फ्याँकिदिए । त्यसपछि बाख्रालाई पठाइयो । बाख्रा पनि नफर्केपछि अविश्वास गरी बाहिर हट्टा गरे । त्यही समयबाट किरातीले बाख्रा खाँदैनन् ।’
‘परापूर्वकालमा किरात पुर्खा हर्कबुुङ आफ्ना सन्तान भुसुरी, छछाप्पा र वाछाप्पालाई लिएर पूर्वको सप्तकोसीका सहायक नदी अरूण, तमोर र सुनकोसी पछ्याउँदै हिमालतर्फ जान खुवालुुङ (हाल : वराहक्षेत्रनजिक रहेको अरूण, तमोर र सुनकोसी नदीको संगम) पुुगे,’ धनकुटा खबर अनलाइनमा नवीन खड्का लेख्छन्, ‘त्यहीक्रममा खुवालुुङको कठिन मार्ग पार गर्नुपथ्र्याे । खुवालुुङको ढोका सधैं बन्द हुन्थ्यो । धामीले मुन्दुम फलाक्दै पशुपक्षीको रगत चढाएपछि मात्र खुवालुुङको ढोका खुल्थ्यो । यहीक्रममा भुसुरीहरूले खुवालुुङको ढोका खुलाउन क्याँकी चरा (रातो जुुरेली) समातेर भोग दिए । भोग खानासाथ खुवालुुङको ढोका खुल्यो । त्यसपछि खुवालुुङ पार गरी उनीहरू उकालो लागे । उता, छछाप्पा र वाछाप्पा केही पछि रहेकाले भुुसुुरीसँगै खुवालुुङ पार हुन सकेनन् ।’
उनीहरूले उकाली चढ्दै गरेका भुुसुुरीलाई सोधे, ‘हैन दाजुुभाइ हो, हजुुरहरूले के–कसो गरी खुवालुुङ तर्नुभयो ? हामी त तलै पो अड्कियौं त ?’ उनीहरूको कुरा सुनेर भुसुरीले ठट्टा गर्दै भने, ‘हैन दाजुुभाइ हो, हामीले त आफ्नै चेलीको रगत चढाएकाले खुवालुुङको बाटो खुल्यो त । उनीहरूको कुरा सत्य ठानेर छछाप्पा–वाछाप्पाले पनि आफ्नी चेलीको हातको औंला काटेर खुवालुङमा रगत चढाएपति खुवालुङको ढोका खुल्यो । उनीहरूले पनि खुवालुङ पार गरे । त्यसपछि खुवालुङको ढोका कहिल्यै बन्द भएन ।
यही विश्वासले किरात राई समुदायको पूूजाआजा तथा शुुभकार्यमा बाख्राको मासुु चलाइँदैन । उनीहरूको पितृपूजा गर्ने स्थानमा बाख्राको मासुु पकाउनसमेत मिल्दैन । बाख्राले पितृ चुला छुन मिल्दैन । पितृ पूजारी माङ्पा र धामीले बाख्राको मासुु खानै मिल्दैन भने यीबाहेकका किरात राई समुदायले सकेसम्म बाख्राको मासुु खाँदैनन् । बाख्राको मासुु खाइहालेमा तितेपातीले नुहाएरमात्र घरभित्र प्रवेश गर्न मिल्छ । यसको मासुु खाएर ननुहाइ घर पसेमा पितृ रिसाउँछन् । सम्बन्धित परिवारमा हानि हुने विश्वास छ । माङ्पा र धामीले खाएमा जिब्रो बसेर बोली नआउने, बौलाउनुका साथै ज्यानै जाने विश्वास छ ।
कतिपय सुुक्सङ धामी अर्थात् असहज मृतात्मालाई बाटो लगाउने धामीले बाख्राको मासुु खाएको पाइन्छ । दुुर्घटनामा परेर मृत्युु भएको र मर्ने बेलामा शरीरमा घाउचोट लागेर मृत्युु भएकाको आत्मालाई असहज मृतात्मा भनिन्छ । मानिस मरेपछिको चोखिने दिन अर्थात् सुुधाइ कार्यमा मात्र बाख्राको मासुु प्रयोग गरिन्छ । यसबाहेकका सांस्कारिक तथा सांस्कृतिक कार्यमा अशुुद्ध तथा अशुुभ मानिन्छ ।
सोह्र वर्षपछि मेरा आँखामा फर्किएको छ, त्यो ज्वाला जसको रापले कुनै दिन डढेको थियो कालो
आदिवासी दिवस र भिखारीदास सदा
आदिवासीको सूचीमा पर्छ तिम्रोे नाम भिखारीदास सदा । हुनुपर्ने हो तिम्रै हातमा तराईको यो शस्य–श्यामल
खेत खन्न छाडेर भाँडा माझ्न छाडेर गिट्टी ओसार्न छाडेर मानिसहरू जात्रा भर्न निस्किसके स्कुल छाडेर
लक्ष्मनियाँ ! तिम्रो लोटा खै ?
लक्ष्मनियाँ ! तिमी लक्ष्मी हौ घरकी तिमी इज्जत हौ कुलकी तिम्रो बाबुको, तिम्रा दाजुभाइको सिंगै